Ahoana ny fiantraikan'ny fampiantranoana anao amin'ny SEO | Martech Zone
Ahoana ny fiantraikan'ny fampiatranoana ny SEO anao
Alarobia, Septambra 6, 2017 Alarobia, Septambra 6, 2017 Douglas Karr
Eny, ny fampiantranoana anao dia mety hisy fiatraikany amin'ny SEO anao. Gaga? Toy izany koa ny ankamaroan'ny olona rehefa fantany fa ny drafitra fampiantranoana azy ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahafahany mahazo SERP avo. Fa nahoana? Ary ahoana?
Nivadika, ny drafitra fampiantranoana anao dia misy fiantraikany amin'ny faritra lehibe telo izay misy fiatraikany amin'ny laharam-pahamehanao: Fiarovana, Toerana ary Hafainganana. Homena anao ny fanapahana tanteraka fa tsy ny fiantraikan'ny drafitra fampiantranoanao ireo zavatra ireo ihany, fa izay azonao atao raisina ny fampiantranoana tsara indrindra ho an'ny mpihaino kendrenao, ary ny fomba fanalefahana ny olana raha sendra azy ireo ianao.
Ny fiarovana ny drafitra fampiantranoana anao
Ny fiarovana dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra tokony hatahorana rehefa mitondra tranokala ianao, na manao hetsika SEO ianao na tsia! Ary ny fitsipika fototra momba ny ankihibeny dia ity: ny tsy fitokisana ny tranokalanao dia ny mety ho voajirika. Ary raha sendra voajirika ianao, dia azo inoana fa azo ovaina ny atiny amin'ny fomba mety hahavery anao ny laharana azonao.
Noho izany, na dia tsy midika aza izany fa tsy hanahaka ny filaharana ny tranokalanao, dia midika izany fa mety hampidi-doza anao izany very ambony kokoa ny filaharana amin'ny farany. Noho io antony io, ny zavatra voalohany tokony hijerenao ny mpamatsy fampiantranoana dia ny fiarovana azy ireo. Manome fiarovana ve izy ireo nivadika ho vidiny? Manara-maso ireo rakitrao ve izy ireo? Raha tsy izany, manome fiarovana bebe kokoa ve izy ireo amin'ny sarany fanampiny? Hanampy anao ve izy ireo raha voajirika ny tranokalanao? Milanja faran'izay betsaka araka izay azonao atao alohan'ny hidiranao amin'ny fonosana fampiantranoana manokana.
Raha tsy manome fiarovana manokana ho azy ny drafitra fampiantranoana anao ary efa mihidy ianao dia ataovy foana sasany ny azo antoka ny tranokalanao manohitra ny hackers arak'izay azonao atao. Ny fanampiana plugins fiarovana, famoronana tenimiafina azo antoka ary fampiasana fomba fanao fiarovana mahazatra dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny loza.
Toerana mpizara ny drafitra fampiantranoana anao
Rehefa mividy fampiantranoana ianao dia mividy habaka ara-batana amin'ny mpizara orinasa iray. Ary ny tranonkalanao dia hilahatra tsara kokoa (na ratsy kokoa) ho an'ireo mpihaino kendrenao miorina amin'ny toerana misy izany mpizara izany. Ohatra, raha te hikendry ireo millennial alemanina te-hahandro ianao dia hahita valiny tsara kokoa amin'ny valin'ny karoka alemà raha manana toerana ara-batana zona euro (na tsara kokoa, alemà) ny fampiantranoanao.
Ity fitsipika fehin-tànana ity dia mihazona amin'ny sehatra manerana an'izao tontolo izao. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny orinasa mpampiantrano dia manana ivon-drakitra amin'ny tanàna vitsivitsy fotsiny. Any amin'ny firenena ve izy ireo sa ny faritra manerantany an'ny mpihaino kendrenao? Ny vokany dia mety ho kely ihany, raha ela ny ela, ary azo antoka fa tsy manan-danja na mavesatra toy ny fananana lohateny pejy voalamina tsara: fa no manaova zavatra.
Raha te hanamaivana ny vokatry ny tranokala izay nampiantrano tamina faritra iray hafa lavitra noho ny mpihaino kendrenao ianao, dia azonao atao ny manandrana mandresy izany amin'ny alàlan'ny fampidirana fampahalalana momba ny toerana sy fampahalalana manokana momba ny toerana ho an'ny tongotrao, pejy ary hafa lahatsoratra manan-danja mifandraika amin'ny SEO. Ny fanampiana ny sarintany google amin'ny tranokalanao izay manondro toerana akaiky ny mpihaino kendrenao dia hevitra tsara koa!
Ny hafainganan'ny mpamatsy fampiantranoana anao
Ny hafainganam-pandehan'ny mpamatsy fampiantranoana anao dia mifamatotra amin'ny toerana: ny akaiky kokoa ny mpizara anao dia eo amin'ny toerana ara-batana amin'ilay mpampiasa farany izay misintona ny tranonkalanao, amin'ny ankapobeny, dia vao haingana ny fotoana laniny. Saingy singa iray kely fotsiny amin'ny haingam-pandeha fampiantranoana izay mety hisy fiatraikany amin'ny toerana misy anao amin'ny fikarohana google.
Singa iray hafa izay misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandeha dia ny processeur an'ny mpizara, ary ohatrinona ny fantsom-pifandraisana sy RAM nomena ny tranonkalanao. Noho io antony io, fampiantranoana natokana dia matetika haingana kokoa noho ny fampiantranoana iraisana. Tsara ny manamarika fa raha betsaka ny mpitsidika sy ny fivezivezena azon'ny tranonkalanao dia betsaka kokoa ny habaka amin'ny serivera ilainy: noho izany dia afaka manitatra arak'izay ilaina fa tsy terena amin'ny ampahany kely amin'ny mpizara zaraina na firy na firy ny fifamoivoizan'ny tranonkalanao Sarobidy tokoa ny fahazoana.
Ny Fitsipika Fototra
Raha mbola mitady fampiantranoana ianao, ny fandinihana akaiky ireo anton-javatra ireo dia afaka manampy amin'ny fananganana tongotrao mora foana izay misy resaka SEO. Ny fisafidianana ny fonosana fampiantranoana mety dia afaka manatanteraka ny fiarovana anao, ny toerana misy anao ary ny hafainganana ilaina mba hahazoana antoka fa tsy manomboka amin'ny fatiantoka ianao. Saingy zava-dehibe ny hametrahana izany amin'ny fomba fijery: ny antony lehibe indrindra misy fiantraikany amin'ny SEO an'ny tranonkalanao dia ireo singa eo an-toerana hatrany.
Tags: drafitra fampiantranoanafiarovana ny drafitra fampiantranoanahaingam-pandeha mpamatsy fampiantranoanaAhoana noahoana ny effet hafainganam-pandeha seofikarohana OptimizationSEOhafainganam-pandeha seotoerana misy ny mpizarahafainganam-pandeha seotranonkala fampiatranoana
Ny fanovana ny maodely mailaka amin'ny OSX dia mora kokoa amin'ny fametahana atiny
Workflows: Fomba fanao tsara indrindra ho an'ny departemantan'ny marketing ankehitriny